Rihkhawdar- ရိခ်ခေါ်ဒါရ် - Global Chin Directory
Visited 2228 times, 1 Visit today
Way up on the Myanmar–India border, Rihkhawdar (ရိခ်ခေါ်ဒါရ်) isasmall but hectic border town and the gateway to mystical Rih Lake. Separated from Mizoram State in India bya100yd-long bridge, Rihkhawdar sees trucks from India and Myanmar move in both directions carrying cargo, while the shops here are full of Indian goods and the Indian rupee is as much the currency as the Myanmar kyat. This isaclosed frontier for both ordinary Burmese and foreigners, although local residents can cross the border during the day. Instead, the main reason to come here is to visit nearby Rih Lake, an idyllic, heart-shaped lake that sits almost on the border with India. The lake is of immense spiritual significance to the local Mizo people, one of the six ethnic groups which make up the Chin people and who are spread across Chin State, Mizoram State, and eastern Bangladesh. (Source: Lonely Planet)
ရိဒ်ရေကန်သည် အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ခေါရ်မြို့အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ တီးတိန်မြို့မှ (၃၃)မိုင် ဝေးပြီး ဖလမ်းမြို့မှ (၆၄)မိုင်ဝေးသည်။ အနောက်ဖက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကျင်းဖိုင်မြို့ရှိသည်။ ရိဒ်ရေကန်၏ ထူးခြားချက်မှာ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရေနောက်ကျိလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကန်ရေနောက်ကျိလာခြင်းသည် ကန်စောင့်နတ်ကြီး၏ ရေကစားမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ရိဒ်ခေါဒါရ်ရွာကိုလည်း မြို့အဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး အစိုးရရုံး များဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ (https://www.chinstate.gov.mm/popular-places/place-225)